Fampandrosoana ny firenena : Manana anjara toerana lehibe ny katolika -
AccueilSosialyFampandrosoana ny firenena : Manana anjara toerana lehibe ny katolika
Fampandrosoana ny firenena : Manana anjara toerana lehibe ny katolika
13/07/2018 admintriatra Sosialy 0
Nigadona tany Toamasina, omaly maraina, ny Kardinalin’i Madagasikara vaovao, Désiré Tsarahazana, rehefa avy nitarika ny lamesa lehibe voalohany tetsy amin’ny Ekar Masindahy François-Xavier, ny alarobia 11 jolay teo. Tsiahivina fa noraisin’ny Filoham-pirenena notronin’ireo olo-manan-kaja ambony, sivily sy miaramila izy tamin’ny fahatongavany teto an-tanindrazana. Tazana nanome voninahitra ny lamesa lehibe voalohany ihany koa ireo mpanao politika sy ireo mpitarika fiangonana samihafa…
Hafaliana ny an’ny Malagasy, indrindra fa ireo mpino katolika, tamin’ny fahazoana Kardinaly vaovao, izay tsy nanana izany ny firenena nandritra ny valo taona. Porofon’izany, tomefy olona ny lalana rehetra izay nalehan’ny fiara nitondra ny Kardinaly Désiré Tsarahazana teto Antananarivo sy tany Toamasina. Hita taratra avy hatrany ny fampiraisana ny olona rehetra tsy an-kanavaka.
Hita ary azo lazaina fa manana anjara toerana lehibe eto amin’ny firenena, indrindra amin’ny fampandrosoana ny ara-toekarena sy ara-tsosialy ny katolika. Raha tsy hitanisa afa-tsy ny lafin’ny fampianarana, izay saika ahitana sekoly katolika avokoa ny faritra maro manerana an’i Madagasikara. Manan-danja sy manan-daza eo amin’ny fanabeazana ho olom-banona ara-batana sy ara-panahy ary ara-pitondran-tena ny katolika. Eo ihany koa ny lafin’ny sosialim-bahoaka, toa ny tontolon’ny fahasalamana, ary anisan’ny manana ivon-toeram-pitsaboana maro izy ireo. Tsy vitan’izany fa ny katolika ihany koa no manana trano fivarotam-boky ho an’ny fanabeazana sy ny fitaizana ara-panahy maro eto Madagasikara ankoatra ny trano printy. Anisan’ny goavana eo amin’ny fampandrosoana ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa maro sy fitaizana ireo olona tsy manan-kialofana, toa ny eny amin’ny Mompera Pedro. Marihina mantsy fa misy famokarana atao amin’ireny ivon-toeram-pitaizana ireny, ary maro ny tombontsoa azo amin’izany, sns.
Noho izany indrindra, amin’ny maha olom-panjakana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, dia miantso ny fiangonana amin’ny fanohanana ny fampandrosoana ny firenena ny tenany.
Iray tamin’ireo Mpitsara voatonona tao anatin’ny fitoriana napetrak’i Houcine Arfa no voasambotra ary nalefa any Ambatolampy amin’izao fotoana izao. Nifandray tsy tapaka nanomboka ny 25 hatramin’ny 29 Desambra 2017 ity Mpitsara ity ary ireo mpiandry ...Tohiny